ကော်ဖီသောက်ဖို့ ဘယ်အချိန်က အကောင်းဆုံးလဲ
13 Jul 2018 . 1:57 PM
နေ့တနေ့ကို လန်းဆန်းတက်ကြပြီး အတွေးသစ်တွေ ရရှိအောင် နံနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ အစပြုရင်း အလုပ်လုပ်ကျတဲ့သူတွေရှိသလို ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်နဲ့ စာအုပ်ဖတ်ရင်း အားလပ်ချိန်ကို အကောင်းဆုံးကုန်ဆုံးကြသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ကော်ဖီကို နှစ်ချိုက်ကြတဲ့ လူတိုင်းကတော့ ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် ပင်ပန်းမှုတွေ ပြေပျောက်ကာ လန်းဆန်းသွားပြီး စိတ်ကူးကောင်းတွေ၊ အတွေးအခေါ်သစ်တွေ ခံစားယုံကြည်ကြပါသေးတယ်။
ကော်ဖီသောက်တာက ကင်ဆာဖြစ်တန်စွမ်းကို လျော့ကျစေခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါလျော့ကျစေတယ်လို့ သုတေသနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Parkinson’s disease) ကိုတောင် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ကော်ဖီသောက်သုံးသူတွေဟာ ကော်ဖီမသောက်တဲ့သူတွေထက်ပင် အသက်ရှည်ရှည် နေထိုင်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း ကော်ဖီအများကြီးသောက်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ကော်ဖီသောက်ပြီး ကောင်းကျိုးတွေ ခံစားနိုင်အောင် ကော်ဖီသောက်သုံးရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော် ….
လူအများစုကတော့ ကော်ဖီကို မနက်ခင်းမှာ သောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များက မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီသောက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီကို ဘယ်အချိန်မှာ သောက်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ စိတ်ဖိအားဟောမုန်း (Cortisol) အမြင့်ဆုံးအချိန် နဲ့ အနိမ့်ဆုံးအချိန်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးဟာ တစ်လှည့်စီသံသရာလည်နေတတ်ပြီး စိတ်ဖိအားဟောမုန်း (Cortisol) အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ ကော်ဖီသောက်သုံးမိရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ခံစားရမှာပါ။
စိတ်ဖိအားဟောမုန်းဟာ (မနက်၆ခွဲမှာ အိပ်ရာထတဲ့) ပုံမှန်လူတစ်ယောက်အတွက် မနက်၈နာရီမှ ၉နာရီအတွင်း၊ နေ့လယ်၁၂နာရီမှ ၁နာရီအတွင်းနဲ့ ညနေ၅နာရီခွဲမှ ၆နာရီခွဲအတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာ ရှိတယ်လို့ Dartmouth College ရဲ့ သုတေသနပညာရှင် ဒေါက်တာ Steven L. Miller က ဆိုပါတယ်။ ဒီအချိန်အပိုင်းအခြားမှာ ကော်ဖီမသောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဟောမုန်းဟာ မနက်၉နာရီခွဲမှ ၁၁နာရီခွဲအတွင်းမှ တစ်ဖန်ကျဆင်းသွားတာကြောင့် ဒီအချိန်အပိုင်းအခြားမှာ ကော်ဖီသောက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ ဖျော်ထားပြီး မိနစ် (၂ဝ) အတွင်းမှာ သောက်သင့်ပြီး အေးသွားရင် အပူထပ်ပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အေးစက်သွားတဲ့ ကော်ဖီကို သောက်တာက ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ ဖြစ်နိုင်ရင် သကြား၊ နို့မှုန့်တွေနဲ့ မရောဘဲ မူလအခြေအနေမှာပဲ သောက်သုံးသင့်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကော်ဖီမှာ ပါဝင်တဲ့ ကဖိန်းဓာတ် (Caffeine) ဟာ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ၆နာရီအထိ သက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့် နေ့လယ်၎နာရီနောက်ပိုင်း ကော်ဖီမသောက်သင့်ပါဘူး။
ကော်ဖီချစ်သူတွေအနေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေကို လေ့လာမှတ်သားရင်း ကော်ဖီရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို ရယူနိုင်ကြပါစေ။
ကျောဖီသောကျဖို့ ဘယျအခြိနျက အကောငျးဆုံးလဲ
နတေ့နကေို့ လနျးဆနျးတကျကွပွီး အတှေးသဈတှေ ရရှိအောငျ နံနကျခငျးမှာ ကျောဖီနံ့သငျးသငျးလေးနဲ့ အစပွုရငျး အလုပျလုပျကတြဲ့သူတှရှေိသလို ကျောဖီခါးခါးတဈခှကျနဲ့ စာအုပျဖတျရငျး အားလပျခြိနျကို အကောငျးဆုံးကုနျဆုံးကွသူတှလေညျး ရှိကွပါတယျ။ ကျောဖီကို နှဈခြိုကျကွတဲ့ လူတိုငျးကတော့ ကျောဖီသောကျလိုကျရငျ ပငျပနျးမှုတှေ ပွပြေောကျကာ လနျးဆနျးသှားပွီး စိတျကူးကောငျးတှေ၊ အတှေးအချေါသဈတှေ ခံစားယုံကွညျကွပါသေးတယျ။
ကျောဖီသောကျတာက ကငျဆာဖွဈတနျစှမျးကို လြော့ကစြခွေငျး၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးခြိုရောဂါလြော့ကစြတေယျလို့ သုတသေနမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ သကျကွီးရှယျအိုတှမှော အဖွဈမြားတဲ့ ပါကငျဆနျရောဂါ (Parkinson’s disease) ကိုတောငျ ၃ဝ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ ဒ့ါအပွငျ ကျောဖီသောကျသုံးသူတှဟော ကျောဖီမသောကျတဲ့သူတှထေကျပငျ အသကျရှညျရှညျ နထေိုငျနိုငျကွတယျလို့ ဆိုထားကွပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ တနျဆေး လှနျဘေးဆိုတဲ့အတိုငျး ကျောဖီအမြားကွီးသောကျရငျတော့ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျတာကွောငျ့ ကျောဖီသောကျပွီး ကောငျးကြိုးတှေ ခံစားနိုငျအောငျ ကျောဖီသောကျသုံးရာမှာ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေို ပွောပွပေးလိုကျတယျနျော ….
လူအမြားစုကတော့ ကျောဖီကို မနကျခငျးမှာ သောကျတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက မနကျခငျးမှာ ကျောဖီသောကျမယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကျောဖီကို ဘယျအခြိနျမှာ သောကျသငျ့သလဲဆိုတဲ့ အခကျြကို သိထားဖို့ လိုပါတယျ။
လူတဈယောကျရဲ့တဈနတေ့ာမှာ စိတျဖိအားဟောမုနျး (Cortisol) အမွငျ့ဆုံးအခြိနျ နဲ့ အနိမျ့ဆုံးအခြိနျဆိုပွီးနှဈမြိုးရှိပါတယျ။ အဲဒီနှဈမြိုးဟာ တဈလှညျ့စီသံသရာလညျနတေတျပွီး စိတျဖိအားဟောမုနျး (Cortisol) အမွငျ့ဆုံးအခြိနျမှာ ကျောဖီသောကျသုံးမိရငျ ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးကိုသာ ခံစားရမှာပါ။
စိတျဖိအားဟောမုနျးဟာ (မနကျ၆ခှဲမှာ အိပျရာထတဲ့) ပုံမှနျလူတဈယောကျအတှကျ မနကျ၈နာရီမှ ၉နာရီအတှငျး၊ နလေ့ယျ၁၂နာရီမှ ၁နာရီအတှငျးနဲ့ ညနေ၅နာရီခှဲမှ ၆နာရီခှဲအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးအခွအေနမှော ရှိတယျလို့ Dartmouth College ရဲ့ သုတသေနပညာရှငျ ဒေါကျတာ Steven L. Miller က ဆိုပါတယျ။ ဒီအခြိနျအပိုငျးအခွားမှာ ကျောဖီမသောကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဟောမုနျးဟာ မနကျ၉နာရီခှဲမှ ၁၁နာရီခှဲအတှငျးမှ တဈဖနျကဆြငျးသှားတာကွောငျ့ ဒီအခြိနျအပိုငျးအခွားမှာ ကျောဖီသောကျတာ အကောငျးဆုံးလို့ဆိုခငျြပါတယျ။
ကျောဖီတဈခှကျဟာ ဖြျောထားပွီး မိနဈ (၂ဝ) အတှငျးမှာ သောကျသငျ့ပွီး အေးသှားရငျ အပူထပျပေးတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး။ အေးစကျသှားတဲ့ ကျောဖီကို သောကျတာက ကနျြးမာရေးထိခိုကျစပေါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကျောဖီတဈခှကျဟာ ဖွဈနိုငျရငျ သကွား၊ နို့မှုနျ့တှနေဲ့ မရောဘဲ မူလအခွအေနမှောပဲ သောကျသုံးသငျ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကျောဖီမှာ ပါဝငျတဲ့ ကဖိနျးဓာတျ (Caffeine) ဟာ ဦးနှောကျအတှငျးမှာ ၆နာရီအထိ သကျရောကျမှုရှိတာကွောငျ့ နလေ့ယျ၎နာရီနောကျပိုငျး ကျောဖီမသောကျသငျ့ပါဘူး။
ကျောဖီခဈြသူတှအေနနေဲ့ ဆောငျရနျရှောငျရနျအခကျြတှကေို လလေ့ာမှတျသားရငျး ကျောဖီရဲ့ကောငျးကြိုးတှကေို ရယူနိုငျကွပါစေ။